Wasiir Maareeye: “Geed dheer iyo mid gaabanba waan u fuuleynaa sidii Warbaahinta dalka loo horumarin lahaa.”:-War-Saxaafadeed+Sawirro – Radio Muqdisho
Nairobi, 12 March 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska, Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Mareeye) oo labadan cisho joogey Nairobi ayaa maanta kulamo la qaatay Safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya, Safiirka Finland iyo Safiirka Japan oo uu kala hadlayey sidii loo horumarin lahaa warbaahinta Soomaaliya oo ay ku jirto warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo tan Dowladda.
Wasiir Maareeye ayaa yiri “Geed dheer iyo mid gaabanba waan u fuuleynaa sidii warbaahinta dalka looga horumarin lahaa dhinacyada tayeynta qalabka ay ku shaqeeyaan iyo kor u qaadista xirfadaha weriyayaasha iyo shaqaalaha warbaahinta dalka.
Kulankii Safiirka Midowga Yurub Michelle Cervone D’urso ayaa ahaa mid si gaar ah looga hadlay arrimaha New Deal-ka, Vision 2016 iyo sidii Wasaaradda looga taageeri lahaa barnaamijyada wacyigelinta bulshada ee ku aadan sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin xor ah.
Wasiir Maareeye ayaa uga mahadceliyey Midowga Yurub taageeradooda joogtada ah ee Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan hirgelinta mashruuca New Deal-ka iyo mashaariicda kale ee ay dalka ka hirgeliyeen oo uu ugu dambeeyey dayactirka waddada isku xirta Garowe iyo Galkacyo oo shalay la saxeexay.
Safiirka Midowga Yurub ayaa sheegay sida uu ugu faraxsanyahay horumarka iyo doorka Wasaaradda Warfaafinta isla markaana ku dhiirigeliyey Wasiirka inuu sii xoojiyo wacyigelinta bulshada iyo horumarinta warbaahinta dalka.
Safiirka Finland Ms Sofie From-Emesberger ayaa iyadana soo dhaweysay dadaalada Wasiirka iyo wasaaradda Warfaafinta.
Wasiirka ayaa Safiiradda uga mahadceliyey hirgelinta mashruuc lagu dayactirayo istuudiyaha SNTV iyo qalabeyntiisa oo dhowaan la dhameystirayo, iyo taageeradooda dhanka kor u qaadida tayada warbaahinta iyo wariyeyaasha Soomaaliyeed.
Wasiir Maareeye iyo Safiirka Japan H.E. Tatsushi Terada ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal.
Wasiir Maareeye ayaa Japan uga mahadceliyey doorkooda Soomaaliya oo ay dalka Japan sanadihii la soo dhaafay labo shir ugu qabtay Soomaaliya isla markaasna dhanka kobcinta tayada shaqaalaha ay kala shaqeeyaan Soomaaliya iyo taageerada booliiska Soomaaliyeed. Labada mas’uul ayaa isla gartay muhiimadda wacyigelinta iyo doorka wasaaradda Warfaafinta iyo in horumarinta warbaahinta ay muhiim u tahay horumarka dalka.